Scrum - တစ်စကေးအခမဲ့ဒီဇိုင်း - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
6 ဒီဇင်ဘာ 2016
Scrum - တစ်စကေးအခမဲ့ဒီဇိုင်း - Scrum သင်တန်း
မိုက်ကရိုဆော့ဖအခါသမယ facilitated ။ Shu အဆိုပါအလုပ်သင်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ် (20% ပြောင်းလဲမှု, Ha အလယ်မှာပြည်နယ် (> 200% အပြောင်းအလဲ) ဖြစ်ပါသည်နှင့် Ri အခွင့်အာဏာ၏အခြေအနေ (> 400% ပြောင်းလဲမှုဆဲနှင့်ကြော်ငြာဖို့အချိန်) ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Ri ပြည်နယ်ရရန်သင်နားမလည်ရန်ရှိသည် Moore ရဲ့ဥပဒေ။
Moore ရဲ့ဥပဒေ Scrum လုပ်. အဘယ်ကြောင့် scales ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်နားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် 1965 ခုနှစ်တွင် Intel ကဂေါ်ဒွန် Moore က၏အဓိကထောက်ခံသူတစ်ဦးချစ်ပ်ပေါ်မှာစစ္များ၏အရေအတွက်မရောက်ကဲ့သို့မပွားခဲ့ watched ။ ဒါကငါးဆယ်ကျော်နှစ်ပေါင်းဆက်လက်သိရသည်။ အဆိုပါပြဿနာကြောင့်အမှန်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲခံခဲ့ရမဟုတ်ဘဲထုတ်ကုန်တိုးတက်မှု, အဆဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်မျိုးရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ Scrum ကိုဖန်ဆင်းသောအခါ 1993 ခုနှစ်တွင်, ငါသည်ထိုကိစ္စအပေါ် Trustees ၏ Object ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု Group ၏ဘုတ်အဖွဲ့ထိုင်ခုံဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့အဆတိုးမြှင့်ဖန်ဆင်းခြင်းကွေးအပေါ် programming ရရန်မျှော်လင့်။ ကောင်စီအပေါ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပရိုဂရမ်းမင်းအထူးကုဒီသဘောမျိုးလုပ်တက်ပူးပေါင်းငါဥပမာ, ဒီအလုပ်ပေါ်အနည်းငယ်စာတမ်းများရေးစပ် "ဟုစီးပွားရေး Object ကိုဗိသုကာပညာ၏အရေးပေါ်" နှင့် "အဘယ်ကြောင့်ငါလုလင်ပျိုချစ်။ "
NOTHING စကေး - သူတို့က Intel မှာသင်ယူကား!
ဆီယက်တဲလ်အတွက် 2016 Construx ဆော့ဝဲအလုပ်အမှုဆောင်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာငါ Scrum လုပ်နေတာ 25,000 ဒီဇိုင်နာများတက်ကို boot သူကို Intel ကမှအသွက်လက်ရှေ့ဆောင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ တစ်ဦးချစ်ပ်ပေါ်မှာ transitors ချုံ့ချဲ့ Moore ရဲ့ဥပဒေရေးစပ်စီစဉ်သူတကတည်းက Intel ရဲ့များ၏ DNA တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကြောင်း Intel ကမှအာရုံစူးစိုက်မှုခေါ်သွက်လက်ရှေ့ဆောင် "ဘာမျှမ scales က" ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်သင်ကိစ္စကိုဂရုစိုက်ဖို့ "အကြေးအခမဲ့" ဒီဇိုင်းကိုမလိုအပ်ပါ။ ဝဘ်တဦးတည်းပုံဥပမာသည်နှင့် Scrum အခြားဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Scrum စကေးအခမဲ့ဖြစ်တဲ့အခါသင်ကဘယ်လိုပြောနိုင်သလဲ
ကျနော်တို့ crosswise မြောက်အမေရိကနှင့်ရုရှားကျော်တစ်ဦးတစ်ကမ္ဘာလုံးဖြန့်ချိအုပ်စုတစ်စုအပေါ်ကို IEEE ဒစ်ဂျစ်တယ်စာကြည့်တိုက်အတွက်မူလတန်းစက္ကူဖြန့်ဝေသောအခါ, ကျောင်းသင်ဝေဖန်သုံးသပ်များစွာကိုတစ်ဦးချင်းစီသို့သော်ဘယ်သူမှအစဉ်အဆက်တိုက်ရိုက်အလိုက်အထိုက်နေတတ်ညွှန်ပြနေတဲ့စက္ကူဖြန့်ဝေခဲ့သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူတိုးမြှင်အမြတ်အစွန်းသရုပ်ပြခဲ့ဖို့အာရုံကိုခေါ်တော်မူ။ Distributed Scrum ခုနှစ်တွင်: ငါတို့သည်တစ်ခုကျယ်ပြန့်ကိုအမေရိကန် / ကနေဒါကို item တိုးတက်မှုကြိုးစားအားထုတ်ရုရှားကပိုမိုအုပ်စုများထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်အုပ်စုများ၏အရေအတွက်ပွားများကြောင်းသရုပ်ပြ Outsourcing ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအသင်းများနှင့်အတူသွက်လက် Project မှစီမံခန့်ခွဲမှုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမျိုးဆက်တစ်ခုကျော်များပြားသတိပေးခံရ။
programming ကိုတိုး၏တပြင်လုံးကိုသမိုင်းကြားထဲကတိုက်ရိုက်အလိုက်အထိုက်နေတတ်၏ဤအံ့ဩရုံ Scrum လုပ်ငန်းများအပေါ်ပြသလျက်ရှိသည်။ Code ကိုစစ်သည်များသည်ကို Magic ဆေး: အခြားပုံဥပမာများအတွက် Scrum နှင့် CMMI အဆင့်5ကြည့်ပါ။ ဒါကသင့်လျော်စွာပြုမိသည့်အခါ Scrum, scale အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်အခမဲ့သောမြေပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည်။
သင်ဖွဲ့စည်းပုံချုံ့ချဲ့မယ်ဆိုရင်ထိရောက်မှုတစ် 400% ပြောင်းလဲမှုအောင်မြင်မရှိသေးပေနှင့်သင်ပိုမိုအုပ်စုများပါဝင်သည်အခါ, အမြတ်အစွန်းမှာတိုက်ရိုက်မတက်ပါဘူးဆိုရင်အကြီးအကျယ်ကွပ်မျက်ဖြစ်ပါတယ်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ သင် Moore ရဲ့ဥပဒေနားမလည်ခြင်းနှင့်ပရိုဂရမ်းမင်း၌ actualize မဟုတ်လျှင်သင့်ရဲ့အုပ်စုများအခမဲ့စကေး get ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ကဧရိယာအခမဲ့အတိုင်းဤသည်အံ့ဩထိုနည်းတူ programming ကိုပြင်ပအုပ်စုများမှာတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။